မန ္တလေးမှာ ဒီလို အမှုတွေရှိနေတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » မန ္တလေးမှာ ဒီလို အမှုတွေရှိနေတယ်
မန ္တလေးမှာ ဒီလို အမှုတွေရှိနေတယ်
Posted by TTNU on Jul 24, 2012 in Critic, Short Story | 32 comments
ကေလးေတြ ညဖက္ မိုးမခ်ဳပ္ၾကနဲ႔
ဘယ်နားမှာတော့ ဓါးခုတ်ခံရတယ် (ရန်ညှိုးမရှိပဲ)
ခုတော့ ကိုယ်တွေ့ဗျာ… ကျုပ်အစ်ကို ခံလိုက်ရပီ…
ရုံးမှအပြန် အစ်ကို အောင်မင်းဦးနှင့် ကျော်ဇင်ဟိန်းတို့ ဆိုင်ကယ်နှင့် အပြန်လမ်းတွင် အနောက်မှ အောင်မင်းဦးဖြစ်သူကို သံတုတ်ဖြင့် ရိုက်ရာ ဆိ်ုင်ကယ်ပေါ်မှပြုတ်ကျသွားပြီး..
လူ၈ ယောက်ခန့် အုပ်စုဖြင့် ဝိုင်းကာ ဆွမ်းကြီးလောင်းကြသည်။
၎င်းတို့တွင်သံတုတ်များ. ဓါးများ အသင့်ပါကြသည်။ ၂ယောက်နှင့် ၈ယောက်..
ဖြစ်သည့်နေရာတွင် လူမှားမည်စိုးသဖြင့် အရိုက်ခံနေစဉ်တွင် အမည် အလုပ်အကိုင်များကို
ပြောပြသော်လည်း သည်းကြီးမဲကြီးသာ ဆော်ကြပါသည်။
ကိုအောင်မင်းဦး ခွေလဲကျချိန်တွင် ၅၊ ၆ ယောက်ခန့်ဝိုင်းပြီး ကန်ကြောက် ရိုက်နှက်ကာ မြောင်းထဲကျသွားသည်ထိပင်. မြောင်းမှာ.. လူတစ်ရပ်စာနီးပါးခန့်ရှိသည်။
ဒဏ်ရာအနေဖြင့်. ဆီးခုံကွဲခြင်း၊ အူမကြီးပေါက်သွားခြင်း၊ နှင့် ဦးခေါင်းတွင် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ
တင်ပါးတွင် အချွန်ဖြင့် ထိုးနှက်ဒဏ်ရာရရှိ။
မောင်ကျော်ဇင်သည် ဓါးဖြင့် ခုတ်ခံရပြီး ဦးခေါင်းတွင် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ ၃ခု လက်မောင်းတွင်
ပြတ်ရှဒဏ်ရာတစ်ခု လက်တွင် ပြတ်ရှဒဏ်ရာတစ်ခု(ဓါးအား ဆုတ်ကိုက်လိုက်စဉ်)
ဒဏ်ရာရရှိပါသည်။ ယခု လက်ရှိ ကုတင် ၃၀ဝ တွင် ကုသလျက်ရှိ။
ဒီလိုမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ရှိနေခြင်းသည် ကောင်းသော လက္ခဏာတည်းမဟုတ်… အထက်ပါကဲ့သို့သော အမှုကိစ္စရပ်များသည် အမြဲတစေ ကြားနေရသော ကိစ္စရပ်အမှုများအဖြစ်
ကြားသိနေရသည်။ ၎င်းကိစ္စအား သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။
မင်းမဲ့စရိုက်ဖြင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ယခုကိစ္စအပါအဝင် ယခင်ကိစ္စများစွာတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် မကိုက်ညီဟု ကျုပ်ယူဆသည်။ ကျုပ် ဖင်ခေါင်းကျယ်ပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မပြောချင်… ကျုုပ်ပြောချင်တာက မန္တလေးမှာ ဒီလိုအမှုတွေ ရှိနေသေးတယ်….. မိတ်ဆွေများ
သင်ဒီ အဖြစ်အပျက်များကို မနှစ်သက်လျင် Share ပါ
အခင်းဖြစ်ရာ သိပ္ပံလမ်း. ၆၉နှင့် ၇ဝ လမ်းကြား NNO ဆိုင်းဘုတ် မျက်နှာခြင်းဆိုင်
မောင်ကျော်ဇင်၏ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာမှ သွေးများ
အောင်မင်းဦးအား ရိုက်နှက်ခဲ့သောနေရာနှင့် ကျသွားသော မြောင်း
ကျွန်မတို့ ဒီသတင်းကိုကြားတော့ စိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ခင်မင်ပြီးတဲ့ မိတ်ဆွေမို့ရော၊
ရွှေမန္တလေးရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်ရော၊ ခဏခဏဒီသတင်းမျိုးကြားနေပါရက်နဲ့ ဒီ culprits တွေကို
မိပြီ၊ ဖမ်းသွားပြီ စသဖြင့် ဘာသံမှလည်းမကြားရ။ ဆိုတော့ စိတ်တွေ ချောက်ချားမိတာ အမှန်ပါပဲ။
ပို့စ်တင်မလားစိတ်ကူးတော့လည်း ကာယကံရှင်တွေ ဘာဖြစ်ချင်မလဲ မသိတာနဲ့ တွေဝေနေတုန်း
ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဖြိုးသီဟက Share ပေးပါလို့ တင်ပေးလာတာနဲ့ ဂဇက်မိတ်ဆွေများမဖတ်ရသေးရင်း
ဖေ့ဘွတ်မှာကျွန်မ Share ထားပြီး ဒီလိုမန်းထားခဲ့ပါတယ်။
ကိုဖြိုးသီဟရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အောင်မင်းဦး နဲ့ ခင်တဲ့ မိတ်ဆွေပါ။
ဒီကလေးနှစ်ယောက်စလုံး အမြန်ကျန်းမာသက်သာလာပါစေရန် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သနေပါတယ်။
ဒီလိုလူတွေကို မိအောင်ဖမ်းပြီး ထိထိရောက်ရောက်အပြစ်ပေးသင့်တယ်
စေတနာ မေတ္တာနဲ ့သတိပေး အကြောင်းကြားတာ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျ
ခေတ်ကြီးက အဲဒီလို ဖြစ်နေပြီပေါ့
ညပိုင်း ပတ်တရောင်လှည့်တဲ့ ရဲတွေ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့်..
ကျွန်တော် ကြုံခဲ့ဖူးသလောက်တော့ ပွဲပြီးမှ ရောက်လာကြတာချည်းပါဘဲဗျာ။
မြန်မာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွေ ထဲက လိုပေါ့ ။ ဟုတ်ဘူးလား။
အဲ့လို အမှုတွေက မိန်းဘက်မှာ အများဆုံးကြားရတတ်တယ်ဗျ။
ရန်ညှိုးမရှိဘဲ အုပ်စုဖွဲရိုက်နှက်ကြတာ ညပိုင်းတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။
အရက်မူးတာလား ၊ ဆေးကွဲတာလားကိုမသိပါဘူးဗျာ
ရဲတွေက လည်း အဲ့ဒါမျိုးဆို ဘယ်လိုက်ရှာရမှန်းမသိတာ တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျ။
မန္တလေးသာတွေ ချိတ်ချိုးရဝူးနော် ကြိုပြောထားတာ မိုက်တဲ့ရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ကျုပ်တို.
ရန်ကုန်သားများထက် လက်ယဉ်တယ်ဗျ ကိုယ်တွေ.ခံရဖူးလို. လူတော့ဘာမှမဖြစ်လို.
တော်သေးတယ် ပီးခဲ့တဲ့ နယူးရီးယားက။ ရန်ကုန်မှာဖြစ်ရင်ဓါးကိုင်ခဲကြတယ်။ဒုတ်တို.
တစ်ခြား ဘာညာပစ္စည်းတို.လောက်ပဲ မန်းမှာက ဓါးအရမ်းဆောင်ကြတာပဲ။ကျွန်တော်တောင်
အပြေးကောင်းလို.လွတ်သာွးတာ။ ဘာမှ မဟုတ်ပဲနဲ.အသလွတ်ရန်စပီး ကွိုင်ရှာခံရတာ ပီးတော့
မင်္ဂလာပါဆရာမ …….. အပေါ်က ကိုပေ ကိုဘဲဥ မန်းလေးမှာတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကို စိတ်ဇိုးတယ် ဆရာမနု က မန်းလေးမှာနေတာ တပည့်မကိုမပြောဘူး တပည့်မကနှုတ်မဆက်ခဲ့ရဘူး …….
ဆရာမရေ မန်းလေးကိုရောက်တော့ ရွာသားတွေနဲ့တွေ့ပြီးထိုင်နေတုန်း ဆိုင်ကယ်လဲကျတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ် အဲဒီအချိန်မှာ မန်းလေးကရွာသူရွာသားတွေကို အရမ်းစိတ်ပူသွားမိတယ် ဒီလိုနေ့စဉ်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ သွားလာနေတာ အန္တရာယ်ဘယ်လောက်များလိုက်မလဲလို့ပေ့ါလေ ….. နောက်တစ်ခုထူးခြားတာက မန်းလေးမှာ ပလက်ဖောင်းပေါ်တွေမှာ လမ်းလျှောက်သူအလွန်နည်းပါးတာရယ် လမ်းဖြတ်ကူးသူနည်းတာရယ်ကိုပါ သတိထားမိတယ် တပည့်ကတစ်ယောက်တည်းလမ်းလျှောက် ကားလမ်း ဖြတ်ကူးတော့ လူတွေဝိုင်းကြည့်တာခံရတယ် ရှက်တောင်ရှက်တယ် တီချယ်ကြီးရေ …..
ယနေ့ လူငယ်တွေ ဘာတွေလိုနေသလဲ….
ဖောင်းတာ ပိန်တာ… ဝင်တာ ထွက်တာ… ရုပ်..တွေ.. နာမ်တွေ.. နဲ့တင်ပြီးမနေသင့်ဘူး…
တရားမှုနဲ့ မတရားမှု… ဒီနေ့လူငယ်တွေ လက်ခံပြီး စိတ်ဝင်စားမယ့် အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပညာပေးဖို့တွေ လိုနေတယ်ဆိုတာရဲ့ ပြယုဂ်တွေပါပဲ။
မဆိုင် ဆိုင်ဆိုင်ပြောစရာလေးရှိလို့ ဝင်အာပါရစေ
မနက်ကတောင် တီဗွီက ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားလာလို့ ခဏကြည့်လိုက်သေးတယ်
အဲမှာ (နေ့ခင်းကြောင်တောင်) လူတစ်ယောက်က အိမ်တစ်အိမ်ကနေ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်တစ်ပင်ကို (ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်) ဆွဲယူလာတာမြင်တော့ ရဲတွေက သင်္ကာမကင်းဖြစ်သွားပြီး စစ်လားဆေးလာတွေလုပ်တယ်
အဲ့မှာ ကျမဘာတွေမိလဲဆိုတော့ ဒီမှာတော့ အဲ့လိုအဆင်သင့်လှည့်လည်နေတဲ့ ရဲတွေမရှိဘူးလားလို့
နေ့လည်းနေ့မို့၊ ညလည်းညမို့ ပတ္တရောင်လှည့်ဖို့လေး
ပန်ပန်ရေ ညလှည့်တဲ့ရဲကားတွေ ဘာတွေ တော့ရှိချင်လည်း ရှိမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လူအင်အားမလောက်တာလား သူတို့ပဲ အလုပ်မလုပ်သလားတော့ အမလည်း သေချာမသိပါဘူး။ သိပ်ပြီး တွေ့လေ့မရှိပါဘူး ညီမရယ်။
မန်းလေးက အမှုတွေ က ဖြစ်လိုက်ရင် အစရှာမရသလို အသေအကြေသတ်ကြတာပါ။
နောက် ဆိုင်ကယ်တွေကလည်း လိုင်စင်မဲ့တွေ ဆိုတော့ လှမ်းတွေ့တဲ့သူကလည်း ပုံပန်းသဏ္ဍန်လောက်သာ ပြောနိုင်ကြတာပါ။ အတိအကျ ပြောနိုင်တဲ့သူရှားပါတယ်။ နောက် အမှုမပတ်ချင်တာကတကြောင်းပေါ့။
သူတို့က တိုင်ရင် နောက်ထပ် ရန်ငြိုးဖွဲ့မှာတွေ ကြောက်ကြတာလည်း ပါပါတယ်။
ဒီက ရန်ပွဲတွေက အငြိုးတွေနဲ့ အုပ်စုဖွဲ့ ရိုက်ကြတာပါ။ သူများ အလစ်ကို။
အမတို့ ကျောင်းတက်စဉ်က ကြုံခဲ့ဖူးတာဆိုရင် ညဖက် ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ အတွဲကို ( နှစ်ယောက်လုံး ဆေးကျောင်းက ) မော်တော်ပီကယ်က ရပ်ခိုင်းတာ မရပ်လို့ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်နဲ့ လှမ်းပစ်လိုက်တာ ကောင်မလေးက နောက်ပြန်ကျ အုပ်စက် ကွဲပြီး ပွဲချင်းပြီး သေသွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲ့ဒီ မော်တော်ပီကယ်ကို တညမှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ဓားတွေနဲ့ ဝိုင်းခုတ်တာ လူသတ်ပွဲလိုပဲ အသေဆိုးနဲ့ သေခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီ အမှု ပေါ်သလား မပေါ်သလား အမသေချာမသိခဲ့ပါဘူး။
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ မိန်းနားတဝို်က် မီးပွိုင့် ရှိပါရက် မော်တော်ပီကယ် မရှိပဲ ပျောက်နေခဲ့တဲ့ ကာလတခု ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ညီမရေ။
ကျုံးထဲမှာ လူသေပေါ်လေ့ရှိတယ် မကြာ မကြာ ။ တမှုမှ ပေါ်တယ် မကြားခဲ့ဖူးပါဘူး ။ အမတသက် ရှိပြီ။
နောက် ညဖက် လူအုပ်စုဖွဲ့ ရိုက်ပြေး တာတွေကလည်း အမြဲ ဖြစ်လေ့ ကြားလေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းတွေပါပဲ။ လူရည်မလည်တဲ့ ကလေးတွေ အပေါင်းအသင်းကြောင့် ခဏတဖြုတ် လိုက်လာမိတဲ့ ကလေးတွေ သေလေ့ရှိပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်က ၁ဝ တန်းအောင်ခါစ ကလေးတယောက် မိန်းထဲမှာ အရိုက်ခံပြီး ဆေးရုံကြီးကို လိုက်သွားမှ မိဘက အလောင်းတွေ့ပါတယ်။ ဘယ်သူ ဘာကြောင့် ဘယ်လို ဆိုတာ အစရှာမရတဲ့ အမှုတခုပါ။ မိဘတွေ က အရူးမီးဝိုင်း ကျန်ခဲ့ကြပါတယ်။
အမတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေ ဆိုတာ စာရွက်ပေါ်ကနေ လူထုကြားမှာ တကယ်စိုးမိုးနိုင်ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါပြီ။ သိပ်တောင် နောက်ကျနေပါပြီ။
နောက် တံခါးဖွင့်လို ဧည့်သည်တွေ ဝင်လာတဲ့အခါ ပြသာနာတွေ ကြီးလာမှာ စိုးပါရဲ့။
ရဲ အင်အား ထပ်ဖြည့်ဖို့ လိုသလို ရှိပြီးသားတွေ လည်း မွမ်းမံရမယ် ထင်ပါတယ်။ တကယ်အရေးမယူပဲ ပင်းစားနေလို့ကတော့ ရှေ့လျှောက် အမတို့ တိုင်းပြည် အမည်ပျက်စာရင်း ဝင်သွားမှာ တွေးပြီး စိတ်လေးမိတယ်။
လောလောဆယ် အမပြောနိုင်တာကတော့ တီချယ်လိုပဲ အိမ်ကိုသာ စောစောပြန်ကြပါလို့သာ။ အသက်ကို ဉာဏ်စောင့်တယ် မလား ။
အပြင်မှာမပြောနဲ့၊ အိမ်မှာတောင်နေရင်ထိုင်ရင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်တာ
ဒါကြောင့် အနော်တို့အိမ်မှာတော့ တံခါးသုံးဆင့်ပိတ်တယ် ဟိ
စိတ်ညစ်လိုက်တာ၊ လိပ်ဖြစ်တာ အခွံထူလို့
အမှုမှန်မြန်မြန်လေးပေါ်ပါစေ ဆုတောင်းပေးလျှက်ပါ ဆွမ်းဝိုင်းလောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်း အဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေပျောက်ရင်သိပ်ကောင်းမှာဘဲနော်။။။
တီချယ်ကြီးရေ … ကြားရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ..
အခုနောက်ပိုင်း အဖွဲ့လိုက်သောင်းကျန်းတာတွေ ခဏခဏတွေ့ရ ကြားနေရတယ် … ။ ဖြစ်လိုက်လျှင် အသေချည်းပဲလေ … ။ လူအားကိုး ၊ လက်ကိုင်အားကိုးနဲ့ဆိုတော့ …. အင်အားနည်းတဲ့ဘက်ကခံရရော ။ ရန်ကုန်မှာလည်း အတူတူပဲ တီချယ်ကြီးရေ လူမိုက်ဂိုဏ်းတွေ ပေါလာတယ် … ။
ပြောကြတာတော့ ထောင်ထွက်တွေကို ပိုက်ဆံပေးငှားပြီး လူရိုက်ခိုင်းတာတွေတဲ့လေ … ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနိုင်ငံထဲမှာတောင် အခုလို မီးများမီးနိုင်ရေများရေနိုင်တွေလုပ်နေတာ … တရားဥပဒေ မတင်းကြပ်လို့ပဲထင်မိပါတယ် ။ လူမိုက်တွေကိုတော့ မျက်နှာသာ မပေးသင့်ပါဘူး … စံနမူနာအနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ကို အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ် ။
ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းတလျှောက် ညဘက်ဆို နယ်ထိန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ကျတဲ့ ရဲပဲဖြစ်ဖြစ် ကင်းလှည့်လျှင် … တယောက်တည်း မလှည့်ဘူး …. ။ ဒါကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် … လူဆိုးလူမိုက်တွေရဲ့ အန္တရာယ်က မသေးဘူးဆိုတာမြင်သာပါတယ် …. ။ တီချယ်ရေ …. သမီးတောင် အိတ်ထဲ ဓါးဆောင်ထားမယ့် အကြံ ခဏခဏဖြစ်မိပါတယ် …. ။ အိမ်ကတားနေလို့ … လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုနဲ့ … ဖမ်းခံရမယ်ဆိုတာနဲ့ ….. တကယ်အကောင်ထည်မဖော်ဖြစ်သေးဘူး … ။ နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြုံတဲ့အခါ .. လက်ဗလာဆို … ခံရဖို့ကိန်းပဲ ရှိပါတယ် … ။
ကူညီပါရစေ ဆိုသောရဲများ လို်င်းကြေးလိုက်တောင်းနေ အဲလေ ဟုတ်ပါဘူး ယောင်လို့ ရန်ကုန်မြို့ စိမ်းလဲ့ကန်သာက ၅လောင်းပြိုင်လူသတ်မူကြီးအတွက် နေ့မအား ညမအား လိုက်လံဖေါ်ထုတ်နေပါသောကြောင့် ကျန်ကိစ္စများအတွက် အချိန်မပေးနှိင်သေးပါ…
ညစဉ်ညတိုင်း သွားချင်ရာသွား နေပါသော်လည်း…………………………..
မခိုင်ခိုင် ဆရာမကြီး ttnu မန်းလေးမှာနေတာ မသိလိုက်တာအံ့ဩပါ၏။
ကိုဘလက်ချော စွယ်တော်ရွက် တို့ကို လိုက်ပို့ပေးဘူးပါသည်။
သူတို့ကလည်း ဆရာမကြီးနှင့်တွေ့ချင်သည်ဟု တောင်းဆိုကြပါသည်။
တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်တွေ့ဘို့ကတော့ သူအားချိန်နှင့်ကိုယ်အားချိန် တို်က်ဆိုင်ဘို့လိုပါတယ်။
မခိုင်ခိုင်မန်းလေးမှာနေသွားတဲ့အချိန်နည်းနည်လေးမှာ မခိုင်တို့ အားချိန်နဲ့ဆရာမကြီးအားလပ်သောအချိန်မတိုက်ဆိုင်တာကြောင့်
ဧည့်သည်လာလျှင်ပို့ပေးနိုင်ရန်ဆရာမကြီး၏ နည်းပါးလှစွာသောအားလပ်ချိန်များကို ကျနော်ကမေးထားပါသည်။
မန်းလေးက မိတ်ဆွေများကို ဒီလောက်လေးနှင့်တော့ စိတ်မဆိုးစေချင်ပါ။
သိပ္ပံလမ်းက ညဖက်ညဉ့်နက်ရင် သွားလို့လာလို့ခုနောက်ပိုင်းသိပ်မကောင်းပါ။
လမ်းမီးမရမှောင်တာရယ်၊ စင်တင်ရှိတာရယ်၊ လူသူပြတ်တာရယ်ကြောင့် ဒုစရိုက်မှု့ခဏခဏကြားရတယ်၊ ဟိုတလောက မိန်းကလေး နှစ်သီး စက်ဘီးနဲ့ အလုပ်ပြန်လာတာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီနဲ့ လူငယ်နှစ်ယောက် ပိုက်ဆံအိတ်လုယူပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့မောင်းပြေးတယ်လို့ကြားမိတယ်။
မိန်းကလေး နှစ်ဦး စက်ဘီးနဲ့ အလုပ်ပြန်လာတာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ —လို့ပြင်ဖတ်ပေးပါ။
ပြီးတော့ ဟိုနေ့က ကလေး၅ယောက်ကို ပေါတာဆွဲသွားပါတယ်
ကိုပေါက်ရေ စကားမစပ် ကျွန်တော်လည်းဒီကြားထဲမန္တလေးရောက်ဖြစ်နေတယ် အလုပ်ကိစ္စနဲ.
ကိုပေါက်တို. ကပေတို.ရောတစ်ခြားမန္တလေးက ရွာသူရွာသားသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကို
Shade ဂျာနယ်မှာလဲ ကိုပေါက်ရေးတဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေဖတ်ရပါတယ်။အပြင်မှာပါစကားတွေ
2005 ခုနှစ်လောက်ထိ မန်းလေးကအမျိုးတွေဆီကို တနှစ်တခေါက် မပျက်မကွက် သွားလည်နေကြပါ။ အငယ်မကတော့ ဆေးကျောင်းပြီးတဲ့နှစ် ၂၀၁၀၊၂၀၁၁လောက်ထိမန်းလေးမှာနေခဲ့တာပါ။ ရိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကြားဘူးပေမဲ့ မကြုံဘူုးခဲ့ပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေပိုဆိုးလာတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်တခု မန်းလေးလောက်နီးနီး သောင်းကျန်းတာ မုံရွာ နဲ့ မကွေးလို့ထင်ပါတယ်။ ပို့စ်ထဲကလို ခပ်ဆင်ဆင်အဖြစ်မျိုးတွေ ကျောင်းဖွင့်ချိန် (တက္ကသိုလ်) ဆိုဖြစ်လေ့ရှိလို့ပါ။ ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ၊ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုမရှိခြင်းရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကိုရော ရှာလို့တွေ့ပါအုံးမလားလို့ တွေးမိပြီး ရင်မောပါတယ်။
ရွှေမန်းသူ ရွှေမန်းသားများလဲ ဒုက္ခ မအေးပါလား ….
ဥပဒေမဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးမှာ နေထိုင်ရသလို ဖြစ်နေပါပြီဗျာ…
ကူညီပါရစေ ဆိုသူများကလည်း ကူညီတာက နောက်
လက်ဖြန့်တာက အရင် ….။
မန်းလေးရောက်ရင် ကျနော့်ဖုန်း 09-680-5396 ကိုသာဆက်လိုက်ပါဗျာ။
မာမီရေ အခုဖြစ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်က ကကျနော်မိတ်ဆွေရဲ့သားဖြစ်နေပါတယ်။
နက်ဖြန်သွားတွေ့ပြီး ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ နောက်ဆက်တ၊ွဲသတင်းတင်ပေးပါမယ်.
ဆရာမကြီးရေ… ကိုရင်က ဒီတခါသင်္ဘောကပြန်လာရင် မန်းလေးဘက်ကို အပန်းဖြေခရီးတက်လာမလားလို့
ကြံနေတာပါ။ ဆရာမကြီးနဲ့ ကိုပေါက်၊ ကိုပေ အစရှိတဲ့ မန်လေးသူားများကို တွေ့ချင်လို့ပါ။
ဒီလိုသတင်းတွေ ကြားတာကြာနေပီ။ ညဘက်ဆို ကျုံးပတ်ပြီး လူမိုက်ဂိုဏ်တွေအုပ်စုဖွဲပြီး ရမ်းကားတယ်
ဆိုင်ကယ်ပြိုင်မောင်းတယ်။ အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ကြတယ် ကြားပါတယ်။
ဆရာမကြီးသတင်းဖတ်တော့ ကိုရင်က နေမဝင်ရင်တော့ အင်မတန် သီလနဲ့ ပြည့်စုံနေပေမဲ့
နေဝင်သွားရင်တော့ ဂျိုကာလို ဘာလာလာဒေါင်းဖြစ်နေတော့ မန်းလေးမှာ ညဘက် ကျုံးပတ်ရဲမရဲတော့
ရပါဒယ်.. ရွာမှာ မန်းလေးဂေါ့ဖ်ဖားသားကြီး ကိုပေရှိဒါပဲ… သူ့ကိုပဲ ပုံအပ်ထားလိုက်ဒေါ့မယ်… ;)
မန်းလေးကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ လာစရာရှိတာ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတိထားပီးတော့ နေလို့ရတာပေါ့နော်
အခုလိုအသိပေးတင်ပြပေးတဲ့ တီတီနုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
တီချယ်ရေ ဒါဟာမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်ပြုမူခြင်းမို ့အတော့်ကိုကြားရစိတ်မချမ်းသာပါဗျာ။
ကျနော်တို ့ဆီဖက်ကလဲ ကလေးသူငယ်အရွယ်မရောက်သေးသူတွေရော၊အရွယ်ရောက်
ပြီးသူတွေပါ အချိန်တွေဖြုန်း၊အရက်၊ဆေးလိပ်၊ကွမ်းယာစွဲနေကြတော့ ဘယ်လိုပြုပြင်သွန်
သင်ကြမလဲ စဉ်းစားရခက်ပါတယ်။ကျနော့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကျနော့်ထက်ငယ်ရွယ်သူတွေ
ကို ပြောပြစည်းရုံးပြီးနိုင်သလောက်တော့ ပြဆိုဆုံးမပေးတတ်ပါတယ်။
ရပါဘီ ကိုပေါက်ရေ ဖုန်းနံပါတ်လေးမှတ်ထားလိုက်ပီဂျို. ဒီတစ်ခါမန္တလေးရောက်ရင်
ကိုပေါက်ကတဆင့် ကျန်တဲ့သူဒွေနဲ.လည်းဆက်သွယ်မယ်နော် အထူးသဖြင့်
မန္တလေးမှာ ဘီယာသောက်ရတာရန်ကုန်နဲ.တူဘူး ပိုသောက်လို.ကောင်းသလိုပဲ
ခုလို သတိပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ ..
ကျနော်လည်း နောက်ဆို အိမ်ပြန် မိုးချုပ်တာကို သတိထားရမယ်ဗျာ ..
တော်ကြာနေ လူမှားပြီး ရိုက်ခံရမှ လွယ်ဘူး …
Noyar၊ မမအညာသူူ၊ မောင်ပေ၊ရွှေမင်းသား၊ဘဲဥ၊ ကပ္ပတိန်၊ခိုင်ခိုင်၊ ဇောက်ထိုး၊ပန်ပန်၊
မပုချ်၊ စနိုးဝိုက်၊ အိတုန်၊ ငပွ၊ ကိုပေါက်၊ ကိုခင်ခ၊ ဖရဲ၊ ရွှေကြည်၊ ရွှေအိ၊ ဂျစ်ပစီ၊ ကိုရင်စည်သူ၊
ဘုဂလန့်၊ ကိုထွဋ်၊ ကိုဘရာ၊ မောင်အံစာ တို့ရေ…
” မိတ်ဆွေများသင်ဒီ အဖြစ်အပျက်များကို မနှစ်သက်လျင် Share ပါ”
ဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း မျှဝေခံစားပေးကြလို့ ကာယကံရှင်များကိုယ်စား
မနေ့ကသားတို့လူမမာမေးသွားကြပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်က တော်တယ်လို့
ပြောတယ်။ အူတွေထိခိုက်သွားတာလို့ သိရပါတယ်။ ဒီကလေးခံရပြီးနောက် ရက်အနည်းငယ်
ကြာတော့ ဒီနေရာမှာပဲ နောက်တစ်ယောက်ထပ်အရိုက်ခံရတယ် လို့ကြားပါတယ်။အခု ဖြိုးသီဟ
တင်ပေးသလို အခိုင်အမာ သတင်းအစအနမရပါ။
သဂျီးကတော့ ယာကူဇာဂိုဏ်းထောင် ဖြေရှင်းရမယ် ပြောဖူးတာပဲ။ ဒါနဲ့ သူ့ကျောမှာ ကန့်လန့်စင်းဂျီး မြင်တော့ ယာကူဇာ နဂါးရုပ်ထင်လို့ မေးကြည့်တာ လားလား…. ဘယ်ဟုတ်မလဲ ခုနှစ်လွှာကပွဲသွားတာ မိသွားလို့ သဂျီးကဒေါ် ကြိမ်လုံးစာ ကျွေးထားတာတဲ့။ သဂျီးနာ၍ အော်ငိုနေဗုံ။
ကျနော်ပြီးခဲ့တဲ့ 26-7-2012နေ့က ဆေးရုံကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။.